Ungawakha kanjani ama-curls abukekayo ahlala njalo – SL Raw Virgin Hair LLC.
Njengomuntu wezinwele zemvelo, uyazi ukuthi lawo ma-bouncy amnandi ama-curls angawela phansi ngisho nangemva kwamahora ambalwa okusebenza.
Kodwa ... uma ziziphatha kahle, uzoba nama-curl asilika, ama-bouncy usuku lonke. Ngosuku olubi? Izoba isicaba njengekhekhe.
Uma ungathanda ukwenza lawo ma-curl aheha iso ekhaya ngaphandle kokuvakashela umenzi wesitayela, nali inkomba esheshayo yokuthi ungakwenza kanjani lokho.
Ungafinyelela lokhu kubukeka ngamathrekhi angeziwe. Kodwa uma ufuna lawa ma-curl asilika, uzodinga ukusebenzisa 100% izinwele zomuntu kumathrekhi akho. Noma yini enye futhi ngeke igoqe futhi.
Insimbi eyisicaba. Uzofuna insimbi eyisicaba yekhwalithi enhle, esesaluni esiza ekwehliseni ukungezwani. I-ayina eyisicaba engu-1.25″ ingakusiza ukuthi udale lawo ma-curl agqamile owalandelayo.
Insimbi egoqayo. Thola i-intshi ye-intshi ye-barrel iron ezokusiza ukuthi uthole lawo ma-curl amakhulu.
Isivikelo sokushisa. I-conditioner ye-leave-in enesivikelo sokushisa iyinketho enhle lapha. Kuzokusiza ukuthi ulawule ukuhwaqabala, uphathe ukoma kuyilapho uvikela izinwele zakho emonakalweni wokushisa.
Isifutho sezinwele. Isifutho sezinwele sokubamba esivumelana nezimo sizovumela ama-curls akho ukuthi agxume ngaphandle kokubukeka eqine ngokweqile.
Inqubo yesinyathelo ngesinyathelo ukuze uzuze ama-curl asilika, ama-bouncy
Qala ngezinwele ezihlanzekile I-Build-up izoba nomthelela ekutheni ama-curls akho asethwe futhi ahlale kahle kangakanani. Ngakho-ke, uzofuna ukwenza lokhu ezinweleni ezihlanzekile, ezomisiwe ezilungele ukwenziwa isitayela sokushisa.
Engeza isivikelo sakho sokushisa/i-leave-in conditioner combo.
Kusuka ku-nape, sebenza ezingxenyeni ezincane zezinwele ngesikhathi. Qala ngokudala ama-curls akho nge-intshi eyi-intshi yomgqomo ogoqayo. (Yebo, siyazi ukuthi kuncane, kodwa sithembe, uzothola lawo ma-curls amakhulu ekugcineni.)
Okulandelayo yinqubo yokusetha ama-curl. Gijimisa insimbi eyisicaba phezu kobude bezinwele okungenani kanye. Khona-ke, ngenkathi ugcina insimbi yakho eyisicaba ihambisana nomhlabathi futhi uqala ukusuka ngezansi nje kwezimpande, sebenzisa i-ayoni eyisicaba ukuze ugoqe izinwele ngaphakathi kuyilapho wehla kancane ngobude bezinwele. Ngenkathi uya phansi, thatha izinwele ezishiywe ngaphansi kwe-ayina eyisicaba futhi uzibophe phezulu nangakwesokudla kwezinye izinwele ezisele ensimbi.
Uma i-ayina eyisicaba isiphelile, jika ngokushesha ingxenye ngeminwe yakho ugoqe izinwele phakathi. Qhubeka uze ugoqe ikhanda lakho lonke.
Uma usuqedile, sebenzisa ikama lezinsiba neminwe yakho kuma-curls ukuze uwakhulule kancane futhi uwanikeze ubude nomthamo wevolumu eduze kwezimpande.
Ekugcineni, vala isitayela sakho endaweni ngenkungu elula yesifutho sezinwele sokubamba esivumelana nezimo.
SL Amanothi Aluhlaza:
Uma izinwele zakho zizinhle noma zicutshungulwe ngokweqile, lapho-ke ngeke ukwazi ukubamba ama-curls Ukuze uthole izinwele ezinhle, ungakwazi ukwengeza ukuthungwa nevolumu ngezandiso zezinwele zemvelo.
Uma uzama ukusheshisa inqubo, ama-curls akho azowela phansi. Qiniseka ukuthi ubeka eceleni isikhathi sokukwenza kahle.